Inona no efa nataontsika mba hampitomboana ny firosoana amin'ny Twitter | Martech Zone
Ny zavatra nataontsika mba hampitomboana ny fifamofoana ao amin'ny Twitter
Alatsinainy Oktobra 27, 2014 Alahady Oktobra 26, 2014 Douglas Karr
Tamin'ity taona lasa ity, niasa mafy izahay tamin'ny fanatsarana ny fifandraisanay tao amin'ny Twitter. Raha tokony hampitombo ny resaka amin'ny bilaogy ataontsika, masoivoho marketing, teknolojia marketing, ary manokana kaonty, nifantoka tamin'ny paikady aho:
aho efa misotro ronono ny kaonty fitorahana bilaogy orinasa. Ny marketing amin'ny atiny dia ifantohan'ny Martech ka maninona ny mpihaino no mizara toy izany? Ireo olona miasa bilaogy orinasa dia tokony hanana fifantohana marketing lehibe kokoa.
aho mifantoka ny kaonty marketing amin'ny fizarana fampahalalana momba ny indostria, ny lahatsoratray, podcast, horonan-tsary ary fampahalalana hafa tena mifandraika. Izahay koa dia mizara indray ny atiny malaza. Twitter dia stream, fa tsy bulletin board, koa raha te-hanatratra ny mpihaino ianao dia mila eo foana rehefa eo izy ireo… ary eo foana izy ireo.
Ny masoivohon'ny varotra, DK New Media, ny adiresy dia mifantoka amin'ny asa vitantsika, vaovao miaraka amin'ny maso ivoho, ary hetsika sy asa soa eo an-toerana izay iarahantsika miasa.
My manokana ny kaonty dia izany fotsiny - mizara fifangaroan'ireo voalaza rehetra etsy ambony miaraka amin'ny famafazana ny toetrako sy ny fiainako an-trano koa.
Izahay koa dia mizara sary maro hafa ao amin'ny Twitter ary mampiasa fidirana amin'ny fizarana tsaratsara kokoa izay Jetpack natolotra ho an'ny WordPress. Miasa daholo… ny mitombo hatrany ny fifamatorana marika ary ny fizarako manokana dia namela ny kaontiko ho fisaka. Angamba izany satria mizara lohahevitra izay ialana amin'ny maro toy ny politika sy ny fivavahana aho. Aza mino ny hype amin'ny mangarahara, fomba tsara hanary ny mpanaraka azy io.
Ny marketing ny tenanao na ny orinasanao ao amin'ny Twitter dia zavatra azonao fehezina mora foana, saingy mila fotoana izany. Matetika, tsy hahita valiny lehibe avy amin'ny Twitter ianao mandritra ny volana vitsivitsy voalohany hahatongavanao, fa rehefa afaka enim-bolana ka hatramin'ny herintaona dia tokony ho tsara ny valiny. Neil Patel, Ahoana ny fomba hampitomboana ny fifandraisan'ny Twitter amin'ny 324%
Ity infographic avy amin'ny Quick Sprout ity dia manome fomba fijery sy statistika mifandraika amin'ny Twitter. Zava-dehibe ny fanekena izany Mihatsara ny Twitter ireo natolony ho fampiroboroboana koa. Ankasitrahako manokana ny fomba nanokanan'i Neil ilay Rahoviana no manoratra statistika eo anelanelan'ny fifamatorana sy ny habetsany Mino mafy aho fa ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy tokony hanatsara fotoana be indrindra amin'ny Twitter matetika… fa tokony hifantoka amin'ny fotoana ifantohan'ny mpihaino azy bebe kokoa.
Tags: ora tsara indrindra ao amin'ny twitterfotoana tsara indrindra handefasana tweetorinasa ao amin'ny twitterfironana ambony indrindra ao amin'ny twitterTwitterfampiratiana twitterinona no bitsika
Oct 28, 2014 amin'ny 2: 29 AM
Heveriko fa zava-dehibe iray hafa tokony hodinihina raha liana amin'ny fandraisana anjara amin'ny Twitter ianao dia ny mandeha ho azy. Tsy afaka miditra ao amin'ny kaontinao Twitter isan'ora ianao mba hamoahana zavatra. Ka ny fampiasana fitaovana toy ny Buffer, HootSuite na SocialOoomph dia tsy maintsy atao. Azoko antoka fa misy fitaovana mandroso kokoa izay mitondra automatique na dia ambaratonga lehibe kokoa aza fa ireo fitaovana ireo dia tokony hamita ny asa amin'ny voalohany.
Oct 29, 2014 amin'ny 2: 37 AM
Tena mpankafy ireo fitaovana mandeha ho azy aho!